गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » यी ५ राशिलाई धेरै प्रगतिको अवसर, ४ राशिको स्थितिमा सुधार : आर्थिक राशिफल/२०७८ मंसिर २० गते, साेमवार
आज भाग्यको नवौं घरमा चन्द्रमाको बलियो योग रहेको छ । राज्यबाट विशेष सम्मान पाउन सकिनेछ । शारीरिक विकासको योग रहेको छ । परिवारका साथ मंगलोत्सवमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। समाजमा शुभ व्ययका कारण तपाईको कीर्ति बढ्नेछ । साँझसम्म विशेष सम्झौता हुनेछ।
आज तपाईको ध्यान नयाँ योजनामा ​​रहनेछ। देवताको दर्शनले मनलाई शान्ति प्रदान गर्नेछ। कानूनी विवादमा सफलता मिल्नेछ, स्थानान्तरणको योजना सफल हुनेछ। दिनको उत्तरार्धमा कठिनाइ भए पनि शक्तिमा वृद्धि हुनेछ। परिवारमा रमाइलो परिवर्तन र मनोकामना पूरा हुनेछ। तपाईलाई कार्यालयमा अनुकूल वातावरण हुनेछ र तपाईका सहकर्मीहरूले तपाईलाई सहयोग गर्नेछन्।
आज धेरै रचनात्मक दिन छ। तपाईंले केहि रचनात्मक र कलाकार कार्य पूरा गरेर दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने काम, तपाईले आज त्यो काम गर्नुहुनेछ। आज तपाईलाई आराम गर्न मद्दत मिल्नेछ। नयाँ योजना पनि मनमा आउनेछ, वरिष्ठको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
आजको दिन धेरै रचनात्मक छ, जुनसुकै काम लगनशील भएर गर्नुस्, आज त्यसको फल एकै समयमा पाउन सकिन्छ। अधुरा काम सम्पन्न हुनेछन्, महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ । कार्यालयमा तपाईको विचार अनुसारको वातावरण बन्नेछ र तपाईका सहकर्मीहरूले पनि तपाईलाई सहयोग गर्नेछन्। साँझ विवाह समारोहमा जाने अवसर मिल्नेछ।
आजको दिन धेरै व्यस्त रहनेछ, तर धर्म र अध्यात्मको मामिलामा केही समय निकाल्नु राम्रो हुनेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ अधिकारीहरूले तपाईंको काममा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गर्न सक्छन्। साँझको समय शुभ कार्यमा बित्नेछ।
आज आपसी वार्तालाप व्यवहारमा संयम र सावधानी अपनाउनुहोला। वरपरका मानिसहरूसँग झगडा हुने सम्भावना छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कुनै शुभ कार्यको चर्चा हुनसक्छ । भाग्यमा विश्वास राख्नुहोस् र आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुहोस्। साँझपछि स्थितिमा सुधार आउनेछ ।
आजको दिन तपाईको लागि लाभदायक छ। कार्य व्यवहार सम्बन्धी सबै विवाद आज समाधान हुन सक्छ। कार्यस्थलमा नयाँ परियोजनामा ​​केही काम सुरु हुन सक्छ। घरजग्गाको मामिलामा परिवार वा नजिकका मानिसहरूका कारण केही समस्या आउन सक्छ।
तपाईको आजको दिन निकै बलियो छ । दिनभर लाभको अवसर मिल्नेछ, सक्रिय रहनुहोस्। परिवारमा शान्ति र स्थिरताको आनन्द लिनुहोस्। जागिर वा व्यवसायमा केही नवीनता ल्याउन सक्नु भयो भने भविष्यमा फाइदा हुनेछ । काममा नयाँ जीवन मिल्नेछ।
आज सजगता र सतर्कताको दिन रहेको छ । व्यापार व्यवसायमा थोरै जोखिम लिनुभयो भने ठूलो नाफाको अपेक्षा छ । दैनिक कार्यहरु भन्दा बाहिर केहि नयाँ मा आफ्नो हात प्रयास गर्नुहोस्। कतिपयले आफ्नो लागि केही पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नयाँ अवसर तपाईको वरिपरि छ, यसलाई चिन्न तपाईको हातमा छ।
आज सामान्य दिन हो। साझेदारीमा गरिएको ब्यापारबाट धेरै लाभ मिल्नेछ। आज दैनिक घरायसी कामहरू सम्हाल्ने सुनौलो अवसर हो। सायद आज तपाईंले आफ्नो बच्चाको बारेमा ठूलो निर्णय लिनु पर्नेछ। इमानदार हुनुहोस् र सेट गरिएको नियमहरू पालना गर्नुहोस्। एकै समयमा धेरै प्रकारका काम हातमा आउँदा चिन्ता बढ्न सक्छ।
आज तपाईको स्वास्थ्यमा सजग रहने दिन छ। जलवायु परिवर्तनले समशीतोष्ण विकारहरू निम्त्याउन सक्छ। खानपानमा लापरवाही नगर्नुहोस् । व्यापार व्यवसायमा दिन सुखद रहनेछ । हतारमा केही गल्ती हुन सक्छ, त्यसैले सबै कुरा सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्।
आजको दिन लाभदायक रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा जोखिम मोलेर आज लाभ मिल्नेछ । धैर्यता र नरम व्यवहारले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर, तपाईले अहिलेसम्म गुमाएको सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पिडामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सके राम्रो हुनेछ।
लोहरीको दिन चम्किनेछ यी राशिको भाग्य, तपाईको राशिको जान्नुहोस् राशिफल / २०७८ पुस २९ गते, बिहीवार
आर्थिक राशिफल पुस २८ गते, बुधवार : यी राशिको खर्च बढ्ने, तपाईको राशिको अवस्था कस्तो रहनेछ जान्नुहोस्
यी राशिका लागि आर्थिक लाभ, कस्तो रहनेछ तपाईको आज : राशिफल / २०७८ पुस २८ गते, बुधवार
आर्थिक राशिफल : यी राशिलाई आर्थिक लाभ, आफ्नो राशिको अवस्था जान्नुहोस् -२०७८ पुस २७ गते, मंगलवार
साप्ताहिक राशिफल : यो साता यी ३ राशि हुँदैछन् मालामाल, जान्नुहोस् तपाइको राशिलाई कस्तो छ ?
यी ८ राशिका लागि राम्रो योग, ३ राशि सावधान : राशिफल / २०७८ पुस २६ गते, साेमवार
दुर्लभ योगका कारण आज ६ राशिलाई लाभ, ४ राशिलाई संकट : राशिफल / २०७८ पुस २२ गते, बिहीवार
आर्थिक राशिफल : यी राशिमा आम्दानी बढ्ने, ४ राशिलाई नोक्सानी -२०७८ पुस २२ गते, बिहीवार
आर्थिक राशिफल : यी ५ राशिले पाउनेछ आर्थिक लाभ, जान्नुहोस् कुन राशिको कस्तो छ ? -२०७८ पुस २१ गते, बुधवार
दुर्लभ संयोगले आज यी ७ राशि मालामाल, ३ राशिलाई संकट : राशिफल / २०७८ पुस २१ गते, बुधवार
जान्नुहोस् आज कसको हुँदैछ उन्नती प्रगती र धनलाभ : आर्थिक राशिफल / ०७८ पुस १८ गते, आइतवार